I-EA Forex yamahhala - I-EA Forex ehamba phambili | Abacebisi Abachwepheshe | Ama-Robots ama-FX
IkhayaFree Forex EAs
I-BF Scalper EA yamahhala Ingqondo ngemuva kwe-BF Scalper EA yamahhala ilula kodwa iyasebenza - i-EA isebenzisa ukuqhekeka kwamaBollinger Bands ekungeneni nasekuphumeni kwezimpawu. Amazinga wokulahleka kokuma okuqondakalayo ahluka phakathi kwe-20 ne [...]
Ilanis EA yamahhala Le nguqulo yamahhala ye-Ilanis EA. I robot ye-Forex ivuleka kuphela ukuthenga amathenda. Lokhu kuvumela ukuhlola ngokugcwele ukusebenza kwe-EA, izinhlelo zokuphathwa kwemali kanye [...]
Free True Scalper EA Umkhiqizo ungumhlahlandlela wamahhala we-Expert Advisor enegama elifanayo. Ngokungafani ne-full version, okwamanje uhweba kuphela inani elinqunyiwe elinemiqulu encane. I-EA isebenza ngendlela ehlukile [...]
I-Helios EA Helios yamahhala yi-Advisor Advisor esekelwe ekuhlaziyweni kwezibalo zedatha yamanani. Kungani Helios EA? Awekho amasu okuhweba angabungozi. Isebenza ngama-quote we-4 nama-5. Amaphrofayli amaningi wokuphatha ingozi. Asikho idiphozi engazelelwe [...]
Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Emile Eagle Eagle EA Mahhala Emile Eagle EA Mahhala Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Ngokungafani ne-full version, akunakwenzeka ukushintsha usayizi we-lot kanye ne- [...]
I-DSProFx ye-Scalp ye-Scalp E-EA DSProFx I-Scalp Expert Advisor yi-robot ye-forex ngokuzenzakalelayo yokuhweba kwe-scalping. Izimpawu zokuhweba zisekelwe ezinkomba ezithile: Ukuhambisa isilinganiso, i-Stochastic Oscillator, i-MACD, nevolumu ivolumu kanye nephethini [...]
Escape Free EA Lite Kuyinto mahhala version of Escape EA nomkhawulo okuningi isethwe 0.03. Uhlelo lokuhweba lusekelwe ekuphumeni kobubanzi bemanani obukhulu. Amapharamitha wokufaka akuvumela ukuba [...]
I-Wolfgrid EA yamahhala Lokhu yisihumusho samahhala se-Wolfgrid EA. Ngokungafani ne-full version, ezinye imisebenzi zikhubaziwe futhi imingcele ayikwazi ukuguqulwa. Usayizi weLoti usethelwe ku-0.01. I-Wolfgrid EA - Incazelo yamahhala [...]
Qaphela: Le-Free Forex EA ayisatholakali emphakathini! I-Headstrong yama-Head Head ye-EA Headstrong Umeluleki wama-Expert Free is a scalper yomkhuba osebenzisa izinkomba ezijwayelekile ezifana namabhande, i-RSI, i-ADX, ne-Moving [...]
Ihobhothi ephephile yamahhala Lokhu yisihumusho samahhala seRobot enenzuzo kakhulu futhi ephephile. I-Robot ephephile yamahhala - Incazelo Le-EA inquma kanjani ukuvula isikhundla? I-Robot ephephile hlola izimpawu ezimbili, isignali yokuqala [...]
I-Python EA Python EA isekelwe ekutheni ukubuyisela ukuguquguquka kwenani lentengo yokushintshashintsha kwamanani ngesikhathi sokulala ebusuku (kusuka ku-20: 00 kuya ku-08: 00 ye-EET). I-backtest yenziwe kusukela ku-2005. I-Python EA [...]
I-Saad Scalper EA Saad Scalper EA ingumeluleki ophelele we-Forex Expert Advisor futhi iphatha amasu amabili ngesikhathi esifanayo nesitayela sayo esiyingqayizivele ukwenza iningi lezohwebo zizuze. Le-Forex EA ikhala amapayipi [...]
I-Digger i-EA Digger EA isekelwe ekutheni intengo ikwazi ukuhambisa isiqondiso esithile phakathi nosuku nezinkathi ezinamandla kakhulu. I-backtest yenziwe kusukela ku-2009. Umeluleki we-Forex Expert ubala isikhundla [...]
I-Grid Harvester EA Lena yi-VERSION YEMAHHALA ye-Grid Harvester EA! Isu elifanayo le-version ephelele, ukuphela kwemikhawulo yilezi zinombolo. Umgomo wayo ukuvuna okuningi [...]
I-Fibonacci EA Fibonacci EA isekelwe kumasu we-Fibonacci alungisiwe. Isebenza kuwo wonke ama-timeframes. Umeluleki we-Forex Expert usebenzisa idatha kusukela ezinsukwini ezimbili ezedlule ukuvula isikhundla (isibonelo: uma uyifaka ku-H1 [...]